Sida ay u samaysmaan iyo noocyada roobab | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | | Ciencia, Saadaasha hawada
Daruuraha waxay ka kooban yihiin tiro yar oo dhibco biyo ah iyo kristantarro yaryar oo baraf ah oo ka yimaada isbeddelka gobolka ee uumiga biyaha ilaa dareeraha iyo adkaanta hawada. Cufnaanta hawadu way kacdaa wayna qabowdaa ilaa ay ka buuxdo oo ay noqdaan dhibco biyo. Markay daruurtu ka buuxdo dhibco biyo ah oo duruufaha deegaanku ay jecel yihiin, waxay ku di'i karaan qaab baraf, baraf ama roobdhagaxyaale.
Ma rabtaa inaad wax walba ka ogaato roobab?
1 Sidee roob loo sameeyaa?
2 Noocyada roobab
2.3 Roob baraf iyo baraf
3 Foomamka roobab iyo noocyada daruuraha
4 Sida loo cabiro roobka
Sidee roob loo sameeyaa?
Marka hawadu dusha kuleylka kuleyliso, kor bay u kacdaa. Meesha loo yaqaan 'troposphere' heerkulkeedu wuu ku yaraadaa joogga, taasi waa, kolba inta aan sii soconno, waa ka qabow, markaa marka hawadu kacdo, waxay ku dhacdaa hawada ugu qabow oo weynaataa. Marka la buuxiyo, waxay isku ururisaa dhibco yaryar oo biyo ah ama kiristaalo baraf ah (waxay kuxirantahay heerkulka hareeraha hareeraheeda) waxayna ku wareegsan tahay qaybo yar yar oo dhexroor ka yar laba mikroone loo yaqaan uumiga uumiga uumiga ah.
Marka dhibcaha biyuhu ay ku dheganaadaan nukliyeerka uumiga iyo cufnaanta hawo ee dusha sare ka joogsan waaya inay soo baxaan, daruuro horumar toosan ayaa la sameeyaa, maaddaama xaddiga hawadu buuxsamayso ee ururaysaa ay wuxuu ku dhammaanayaa koritaanka dhererka. Daruuraha noocan ah ee ay samaysmaan xasilooni darrada hawada waxaa loo yaqaan Cumulus humilis in, markay u koraan si qumman oo ay gaaraan dhumuc weyn (oo ku filan si aan ugu oggolaano shucaac kasta oo qorraxda inay dhaafto), waxaa loo yaqaan Cumulonimbus.
Uumiga ku jira cufnaanta hawada ee gaadha xajmiga xajmiga dhibcaha, laba xaaladood waa in la buuxiyaa: tan hore ayaa ah in cufnaanta hawadu ayaa qabow ku filanMidda labaad ayaa ah inay ku jiraan hawo uumiga isku-buuraysan (hygroscopic condensation nuclei) hawada ay dhibco-biyood ku abuuri karaan.
Mar alla markii daruuruhu samaystaan, waa maxay waxa ku dhaliya iyaga inay keenaan roob, roob dhagaxyaale ama baraf, taas oo ah, nooc nooc roob ah? Dhibcaha yaryar ee daruurta ka kooban oo lagu dhex xannibo jiritaanka cusbooneysiinta, waxay bilaabi doonaan inay ku koraan kharashka dhibcaha kale ee ay ka helaan dhicitaankooda. Laba ciidan ayaa si aasaasi ah uga hawl gala dhibic kasta: jiidis awgeed in hawada sare ay hadda ku socoto, iyo miisaanka dhibcaha laftiisa.
Marka dhibcaha dhibco ay weynaadaan si ay uga adkaadaan xoogga jiidaya, waxay ku degdegi doonaan dhulka. Muddada dheecaanka biyuhu ku qaataan daruuraha, wey sii weynaanayaan, maadaama ay ku darayaan dhibco kale iyo uumiga kale ee uumiga. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale ku tiirsan yihiin waqtiga ay dhibcayaashu ku qaataan kor u kaca iyo soo degidda daruurta iyo tirada guud ee biyaha ay daruurtu leedahay.
Noocyada roobabku waxaa loo bixiyaa inay yihiin shaqaynta qaabka iyo cabbirka dhibcaha biyaha ee roobka ka da'a xaaladaha ku habboon. Waxay noqon karaan, qulqulaya, roob, roobdhagaxyaale, baraf, qabow, roobab, iwm
Dillaacintu waa roobab yaryar oo dhibco ah biyuhu aad ayey u yaryihiin oo si siman u dhaca. Caadi ahaan, dhibco-biyoodyadu ma helaan inay carrada aad u qoyaan aadna waxay ugu tiirsan yihiin arrimo kale sida xawaaraha dabaysha iyo qoyaan isku dhow.
Roobabku waa dhibco waaweyn oo badanaa ka soo dhaca hab rabshad leh iyo muddo gaaban. Roobabku waxay u muuqdaan inay ka dhacaan meelaha cadaadiska hawadu hoos u dhacdo isla markaana la abuuro xarun cadaadis hoose ah oo loo yaqaan duufaan. Roobabku waxay la xiriiraan daruurahaas nooca ah Cumulonimbus si dhakhso leh ayey u samaysmaan, markaa dhibcaha biyuhu way weynaadaan.
Roob baraf iyo baraf
Roobku wuxuu kaloo noqon karaa qaab adag. Tan awgeed, daruuraha dhexdooda kiristaalo baraf ah waa inay ku samaysmaan daruurta dusheeda mar hore heerkul aad u hooseeya qiyaastii -40 ° C. Kiristaaladani waxay ku kori karaan kharashka dhibcaha biyaha heerkul aad u hooseeya oo baraf ku qabta (oo ah bilowga samaynta roob dhagaxyaale) ama ku biirista kiristaalo kale si ay u samaystaan ​​baraf baraf ah. Markay gaadhaan cabir ku habboon iyo culeyska culeyska awgeed, waxay ka tagi karaan daruuraha oo keenaya roob xoog leh dusha sare, haddii xaaladaha deegaanku ku habboon yihiin.
Mararka qaar barafka ama roobdhagaxyaalaha daruurta ka soo baxa, haddii ay la kulmaan lakab hawo diirran dhicitaankooda, way dhalaalaan ka hor inta aysan dhulka gaarin, aakhirkana u horseeda roobab qaab dareere ah.
Foomamka roobab iyo noocyada daruuraha
Nooca roobabku wuxuu aasaas ahaan ku xiran yahay xaaladaha deegaanka ee daruurtu ka samaysan tahay iyo nooca daruur ee samaysma. Xaaladdan oo kale, roobabka ugu caansan waa noocyada hore, aftahannada iyo gudbinta ama noocyada duufaanka.
Roob hore Waa midka ay daruuraha ku xiran yihiin jihooyinka, kuleyl iyo qabowba. Isgoyska u dhexeeya wejiga diiran iyo wejiga hore ee qabow wuxuu sameeyaa daruuro siiya roobab nooca nooca hore ah. Wejiga hore ee qabow wuxuu sameysmaa marka tiro hawo qabow ay riixdo oo barakiciso tiro diiran oo kor u socota. Markay fuulayaan, way qaboojisaa oo waxay abuurtaa daruuro abuuritaan. Xaaladda hore ee diiran, tiro hawo diiran ayaa ku dul qulquleysa mid ka qabow iyada.
Marka sameynta hore ee qabow ay dhacdo, caadiyan nooca daruurta ee sameysmaya waa a Cumulonimbus ama Altocumulus. Daruurahaani waxay u muuqdaan inay leeyihiin horumar ballaaran oo toosan, sidaas darteedna, waxay kicinayaan roobab xoog leh oo aad u sarreeya. Sidoo kale, cabirka dhibcaha ayaa aad uga ballaaran kan kuwa ku sameysma wejiga diiran.
Daruuraha ku sameysmaya wejiga diiran waxay leeyihiin qaab isku dheellitiran oo caadi ahaan ah Nimboestratus, Stratus, Cudurka 'Stratocumulus'. Caadi ahaan, roobka ka da'a dhinacyadaan waa ka jilicsan yihiin, nooca qulqulaya.
Marka laga hadlayo roobka duufaanka, oo sidoo kale loo yaqaan 'nidaamyada wax soo saar', daruuraha waxay leeyihiin horumar badan oo toosan (Cumulonimbus) sidaa darteed way soo saari doonaan roobab xoog leh oo muddo gaaban socdey, inta badan daadad.
Sida loo cabiro roobka
Si loo cabiro qadarka roobka ama barafka ku soo dhacay aag cayiman iyo mudada u dhexeysa, waxaa jira qiyaasta roobka. Waa nooc ka mid ah muraayad qoto dheer oo u eg qaab madadaalo ah oo u soo diraya biyaha la ururiyey weel qalin jabiya halkaas oo wadarta guud ee roobka da'a ay ku ururaan
Waxay kuxirantahay meesha lagu dhejiyo qiyaasta roobka, waxaa jiri kara arrimo dibada ah oo badala cabirka saxda ah ee roobka. Khaladaadkan waxay noqon karaan kuwa soo socda:
Xog la'aanta: Tixraacyada waxaa lagu dhammaystiri karaa isku xirnaanta saldhigyada kale ee u dhow ee leh xaalad dhuleed oo la mid ah waxayna ku jiraan aagag cimilo ahaan isku mid ah.
Khaladaadka shilalka: qalad aan kala sooc lahayn, xog khaas ah ayaa muujinaysa qalad laakiin dib uma soo noqnoqonayso (biyaha qaar ayaa hoos u dhacay intii cabbirka socday, khaladaadka daabacaadda, iwm) Way adagtahay in la ogaado in kasta oo qalad gooni ah uusan saameyn ku yeelan doonin daraasad guud oo leh qiimeyaal muddo dheer ah.
Khaladaadka nidaamsan: waxay saameeyaan dhamaan xogta xarunta inta udhaxeysa waqti go'an oo had iyo jeer isku jiho ah (tusaale ahaan, goobta oo xaruunta kuxun, adeegsiga baaritaano aan habooneyn, isbadalka goobta idaacada, isbadalka goobjoogaha, xaalada xun ee wadanka. qalab)
Si looga fogaado inay daadato dhibcaha dhibcaha markay garaacayaan cirifka kore ee cabirka roobka, waxaa lagu dhisay geesaha beledka leh. Waxaa sidoo kale lagu rinjiyeeyay caddaan si loo yareeyo nuugista shucaaca qoraxda oo looga fogaado sida ugu macquulsan uumi bax. Adoo ka dhigaya marin biyoodka ay biyuhu ku dhacaan weelka oo cidhiidhi ah oo qoto dheer, xaddiga biyaha uumi baxa waa la dhimayaa, sidaa darteed cabirka guud ee roobabku wuxuu ugu dhow yahay midka dhabta ah ee ugu macquulsan.
Meelaha buuraha, halkaasoo ay caadi ka tahay roobabku inay ku jiraan qaab adag (baraf) ama heerkulku hoos uga dhaco barta qabow ee biyaha, nooc ka mid ah wax soo saarka ayaa badanaa lagu daraa keydka (sida caadiga ah, kaalshiyam aan kaarboon lahayn) oo shaqadoodu tahay yareynta qiimaha heer kulka ay biyuhu ku adkeyn lahaayeen.
Waa in lagu xisaabtamo in mowqifka cabirka roobku uu saameyn ku yeelan karo cabirkiisa. Tusaale ahaan, haddii aan dhigno agagaaraha dhismooyinka ama geedaha agtiisa.
Qiyaasta roobka la ururiyey ayaa lagu cabiray litir halkii mitir laba jibbaaran (l / m2) ama maxaa lamid ah, milimitir (mm.). Cabbirkani wuxuu matalayaa dhererka, millimitir,
taasi waxay gaaraysaa lakab biyo ah oo daboolaya dusha sare ee hal mitir oo laba jibbaaran.
Macluumaadkan waxaad ku baran doontaa wax badan oo ku saabsan roobabka, noocyada roobka iyo inaad si fiican u fahamto ninka cimiladu tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Roobka
Maqaal aad u wanaagsan, wax badan buu ii adeegay. Waxaan ku faraxsanahay in macluumaadka la dhameystiray si loo awoodo in si sax ah wax loo sheego. Salaan.
Ku jawaab Mairene
God weyn oo laga helay Antarctica